Masuuliyiinta Maamulka DF ee Hiiraan oo Khilaaf uu soo kala dhex gelay - Caasimada Online
Home Warar Masuuliyiinta Maamulka DF ee Hiiraan oo Khilaaf uu soo kala dhex gelay
Masuuliyiinta Maamulka DF ee Hiiraan oo Khilaaf uu soo kala dhex gelay
Gobolka Hiiraan wararka ka imaanaya ayaa waxaa ay sheegayaan in qilaaf xooga uu soo kala dhex galay Masuuliyiinta Dowlada ee gobolkaas.
Axmed Cabdalla Inji oo ah gudoomiye ku xigeenka Gobolka Hiiraan oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay inuu jiro khilaaf xoogan oo u dhaxeeyo masuuliyiinta maamulkaasi.
Gudoomiye ku xigeenka Wuxuu sheegay inuu khilaafkaasi udhaxeeyo Guddoomiyaha Maamulka Gobalka Hiiraan ee Dowlada Soomaaliya iyo masuuliyiinta kale ee Gobalka kala shaqeysa.
Waxaa lagu Micneeyayay Sababaha keenay khilaafka udhaxeeya maamulka ayuu ku sheegay inuu yahay Maamulka Gobalka Hiiraan inuusan aheyn mid ushaqeeya shacabka Gobalkaasi islamarkaana uu ka shaqeeyo waxyaabo aan ku dheehneyn rabitaanka shacabka Gobalkaasi.
Axmad Cabdala Inji ayaa Dowladda Soomaaliya wuxuu ka codsaday inay soo fara geliso khilaafaadka ka taagan Gobalka Hiiraan,hadii kalena ayuu sheegay inay suuragal tahay in dagaalo qabiil halkaasi ay ka dhacaan Gobalka Hiiraana uu dib ugu noqdo dagaal beeleed.